“ကော်မရှင်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ကော်မရှင်´´
Posted by ခင်ခ on Jul 5, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 21 comments
အိုးသည် – ညဉ်းဆီက ဘုရားပန်း ဈေးဝယ်သူတွေကို ပန်းရောင်းရင် ငါ့ အိုးလေးပါတွဲ ရောင်းပါလားဟင်
ပန်းသည် – အို ဘုရားပန်းလာဝယ်တဲ့သူတွေက သူတို့မှာ ပန်းအိုးရှိပြီးသားတွေပါ လာဝယ်ရင် ဘုရားပန်းအိုးရောရောင်းလားလို့ မေးတာကြားဘူးပါ့တော်။
အိုးသည် – အရင်ရှိတာတော့ရှိတာပေါ့ အခုလိုတွဲရောင်းတော့ ပန်းအိုးအသစ်လဲချင်စိတ်ရှိသွားရင် ငါ့အိုးလေး တွေလည်း ရောင်းရတာပေါ့အေ။
ပန်းသည် – ညဉ်းက ညဉ်းအိုးရောင်းရဖို့ ငါ့ပန်းတွေနဲ့တွဲရောင်းကာမှ ပန်းဘဲဝယ်ချင်တဲ့သူက ပန်းဘဲမရောင်း ဘူးထင်ပြီး မ၀ယ်မှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေပါ့မယ်တော်။
အိုးသည် – အကုန်လုံးတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ ပန်းတစ်ချို့ကို ပန်းအိုးလေးနဲ့တွဲပြီး ပြထားမှာပေါ့ ဒါဆို ပန်းလာဝယ်တဲ့သူက အိုးနဲ့ပန်း မြင်ပြီဝယ်ချင်တော့လည်း ညဉ်းပန်းရော ငါ့အိုးရော ရောင်းရတာပေါ့
ပန်းသည် – အကယ်လို့ ငါ့ပန်း အလွတ်တွေရောင်းလို့ကုန်ရင် ညဉ်းပန်းအိုးထဲက ပန်းတွေပါ ငါ့ကတော့ နုတ်ရောင်းမှာနော်။
အိုးသည် – အေးပေါ့ရောင်းရမှာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဈေးဝယ်ကို ပန်းအိုးရောဝယ်သွား မလားတော့ နည်းနည်း မေးပေးပေါ့အေ၊ ငါ့ပန်းအိုးပါရောင်း ရရင် ရောင်းရတဲ့ အိုးပေါ်မူတည်ပြီး ညဉ်းကိုရောင်းပေးခ(ကော်မရှင်)ပေးမှာပေါ့။
ပန်းသည် – ဒါဆိုရင် နင်အိုးရှိသလောက် ပန်းတွေထိုးပြီး တင်ထားလိုက်မယ်လေ ပန်းဘဲလိုချင်တော့လည်း ပန်းဘဲထုတ်ရောင်း လိုက်မှာပေါ့ အဲလို အကုန်ထိုးတော့လည်း အိုးပါဝယ်ချင်ရင် ညဉ်းအိုးရော ငါ့ပန်းရော မြန်မြန်ကုန်တာပေါ့တော်။
အိုးသည် – အဲဒါဆို ငါအိုးတွေထုတ်ပြီး ခင်းလိုက်မယ် ညဉ်းလည်း ညဉ်းပန်းတွေ လာထိုးလိုက်ပေါ့။
ပန်းသည် – ညဉ်းအိုးတွေရောင်းရတဲ့အပေါ် ငါ့ကိုရောင်းပေးခ(ကော်မရှင်)ပေးမှာနော်။
အိုးသည် – စိတ်ချပေးမှာပေါ့။
ပန်းသည် – ညဉ်းအခြားနေရာ ပန်းအိုးပို့စရာရှိသေးရင် သွားပို့လေ ငါရောင်းထားပေးမယ်၊ ထားခဲ့တဲ့ အိုးအရေ အတွက်သာ ညဉ်းမှတ်သွားလိုက်။
အိုးသည် – အေး ဒါဆို ဈေးဟိုဘက်ထိပ်ဘက် ခဏ အိုးသွားစပ်လိုက်အုံးမယ်ခဏလေးဘဲ။
ပန်းသည် – အေးအေး စိတ်ချ ငါ့ရောင်းထားပေးမယ်။
မိတ်ဆွေ သင့်ပစ္စည်းလေး အရောင်းတွက်ဖို့ ကော်မရှင်ပေးရေး စဉ်စားစို့ …………..။
ဟေဟေဟေ့ လေးခ ကျွန်တော်ယောက္ခမကြီး ပန်းထိုးပီးရောင်းပေးပါလားဟင်… လေးခကို ကော်မရှင်ပေးမယ်လေ…….. ခွိ
အင်း ကော်မရှင်ထက်စာရင် “ ဟေဟေဟေ့ လေးခ ကျွန်တော်ယောက္ခမကြီး ပန်းထိုးပီးရောင်းပေးပါလားဟင်… လေးခကို ကော်မရှင်ပေးမယ်လေ…….. ခွိ´´ ဒီစာလေးကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ရန်ကုန်ရောက်တုန်း သွားပြလိုက်ရင်တော့ဖြင့်…………… အဲ ဒါကော်မရှင်ထက် ပိုရချင်ရမှာလေ ဘယ်နယ့်လဲ လုပ်လိုက်ရမလား ဆရာ။
အမငီး လုပ်ပါနဲ.ဂျာ… အလကားနောက်တာပါ… ယောက္ခပေးထားတဲ့ အိမ်လေး အခုမှ နေတာ တလ ချိတေးဒယ်………..ခိခိခိ
ကျောက်စ်လည်း အိမ်ကဂွစာ အမအပျိုကြီးကို…
ရင်ဘတ်ဂျီးထဲဂ အဂျစ်ဒွေ မွေးဖွားဒတ်ဒယ်ဆိုဒဲ့
အသီးနှလုံးကိုရော ရောင်းလို့ ရမားဟင်င်
ကိုကျောက်အမအပျိုကြီးကို အံစာတုံး အသီးနှလုံးနဲ့ တွဲပြီး အစွံထုတ်လိုက်။
ဒါဆို အံစာတုံးက ကိုကျောက်ကို ကော်မရှင် ပေးလိုက်ပေါ့။
နှစ်ယောက်လုံး ထွတ်စေချင်တာ ထွက်သွား မကောင်းဘူးလား ဆရာ ၂ ယောက်?
မီလုပ်ပါနဲ့ ဆြာခရယ် ကျောက်စ်အမကြီးက ၅၀နားနီးနေပြီ ဟိ
ကိုကျောက် ကလည်း မနေ့က ဖေ့ဘုတ်မှာ ထိုင်းကကျော်ကြားတဲ့ ၆၁ နှစ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးက အခုလူထွက်ပြီး အသက် ၅၀ အရွယ် အမျိုးသမီးနဲ့ ဖူးစာရှင်အချစ်တွေ့လို့ လက်ထပ်ယူတယ်တဲ့ဗျ။
ခုပဲကြည့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြေလည်ရင် မောင်အံရောဦးကျောက်ပါအိုကေသွားပြီ။
အပြန်အလှန်စကားပြော ဟန် လေး
ရေးထားတာ ကြိုက်ပါအိ ။
အို… ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ဝယ်မယ်ကွာ
အကို. လက်ဖက်ရည်ဖိုးလေးတော့ ပေးနော်………… အာဟိ
ကျုပ်တို့ဆီမှာ ကော်မရှင်နဲ့ရောင်းတာက ဘောလုံးပွဲ မောင်းနဲ့ နှစ်လုံးသုံးလုံးဗျ…။ 10% အထက်မှာရှိတယ်နော် စိတ်ဝင်စားရင်………………။
နတ်သမီးတွေကို လျှော့ဈေးနဲ့ ထုတ်ရင်ကောင်းမလားမသိ
ဆရာမိုက်ကလည်း ပန်းအိုးနဲ့ထိုးရောင်းတာ ဟန်လေးလုပ်ပြတာပေါ့ ပန်းစည်းကိုတော့ ပြုပြင်ပြီး ဘယ်ထိုးမှာလဲဗျ။
ဖိနပ် တစ်ဖက်ဝယ် ရင် နောက်တစ်ဖက်ပါ အလကားရမယ်။ ငိငိငိ
ကျုပ်ဖြင့် ဂျပန်က မောင်ကို ရေနံချောင်းဘက်က မောင် အလိုက်ပေး ရောင်းတာကို ဝယ်မဲ့သူ မရှိလို့။
နောက်ခါရောင်းရင် တာဝလိန်သာ က မောင် ကို ပါ တွဲထုတ်ရမယ်။
သားသားက အရမ်းချောတာဆိုတဲ့ ကောင်ကလေးပါထပ်ထည့်…
ဒါမှ မယူရင် ကြောင်ခြစ်ခံရမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်လိုက်လေ
ဟောင်ကောင်က လူဂျီးကိုပါ ထည့်မလို့ မရတော့လို့သာ။
တွဲပေးပုံက စိတ်ဝင်စား စရာမှမပါသာ
တကယ်ဆို ဂျပန်က မောင်ကို ရေနံချောင်းဘက်က မောင် အလိုက်ပေးပြီး KZ ကို ကံစမ်း မဲအဖြစ် မဲနှိုက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော်သေးတယ်။ ( နောက်မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း မဲ တွေအားလုံးမှာ ပေါက်မဲ တစ်ခုမှမပါဘဲ ထားလိုက်လေ) မဟုတ်ဘူးလားဗျ။
နောက်ခါ အဲ့လို လုပ်လိုက်မယ်။ ခွိခွိခွိ။